NYI LYNN SECK 18+ DEN: January 2006
Posted by NLS at 1/31/2006 02:54:00 PM2comments Links to this post
Posted by NLS at 1/31/2006 12:14:00 PM0comments Links to this post
လမ်းခရီးမှာ ကျေးငှက်တွေကို အဖှောပြုခဲ့တယ်
ကြာပန်းတွေ ပြည့်နေတဲ့ ချစ်ရေကန်ကိုလည်း
အခုတော့ နှင်းတစ်ယောက်တည်း ငေးမောမျှောကြည့်နေရမယ်
နှင်းအတွက်ကို ကိုးကွယ်မိသူရဲ့ အရိပ်အရောင်များ
Khin One Poem
Posted by NLS at 1/31/2006 11:31:00 AM0comments Links to this post
အရမ်းမိုက်တဲ့ မြန်မာ သီချင်းဆိုဒ် တစ်ခု ရလိုက်တယ်။ ဒေါင်းလုဒ်တော့ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် သီချင်းတွေ အများကြီးပဲ။ မြန်မာ အမ်ပီ သရီးထက် မညံ့ဘူး။ တချို့ဟာတွေဆို ပိုလို့တောင် ကောင်းသေးတယ်။ အသစ်တွေလည်း ရှိတယ်။ သီချင်း တောင်းယူလို့လည်းရတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပြုလုပ်ပေးထား တာက ကိုဂျေဆန်နဲ့ မမေဦးပါ။ ဟစ်ဟော့ သီချင်းတွေ များပါတယ်။ ဒေါင်းလုဒ် မရပေမယ့် အားလုံး ကျေနပ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပြောပြပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုလည်း ကျေးဇူးပါပဲ။
Tags: Myanmar, Mp3, Download, Music
Posted by NLS at 1/29/2006 07:06:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/28/2006 09:17:00 PM0comments Links to this post
မောင်နတ်တို့ လည်း အလှအပကို ခံစားတတ်ပါတယ်။ ကြိုက်လည်း ကြိုက်ပါတယ်။ အနုပညာ အမြင်နဲ့လည်း ကြည့်တတ်ပါတယ်။ ချောတာကို ချောတယ်လို့ မြင်သလို၊ မလှတာကို မလှဘူးလို့လည်း မြင်တတ်ပါတယ်။ အခု ဒီဓါတ်ပုံတွေ တွေ့တော့ မောင်နတ် ဘာဖြစ်လည်း မေးရင် မိုက်တယ်ကွာလို့ ပြောမိပါတယ်. ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘောလုံးပိုက်ထားပြီး အချိုးကျကျ ရပ်နေတဲ့ ကောင်မလေး ပုံက မျက်စိထဲ တန်းဝင်လာတယ် ခင်ဗျ။ တင်လေးကိုပစ်၊ ရင်လေးကို ချီ ၊ ခေါင်းလေးကို မော့ပြီး စစ်ပွဲမှာ ရန်သူကို အကဲခတ်နေတဲ့ မြှားသမားကြီး တစ်ယောက်လို အရှေ့စူးစူးကို မျှောကြည့်ရင်း မတ်တပ်ရပ်နေပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ကောင်မလေး တွေကို ကြည့်လိုက်တော့ ဘောင်းဘီ တိုလေးတွေနဲ့ ပေါင်ဖြူဖြူ လေးတွေကို တခမ်းတနား ပြနေကြပြန်သဗျ။ ထက်ထက်ဝင့် လေးကိုလည်း မောင်နတ်တို့ သယ်ရင်း တစ်စုက ထက်ထက်ပွင့် လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ အမည် ပြောင်းလိုက်ကြောင်းပါ။ တချို့ကလည်း ကတုတ်ကျင်းထဲက စစ်သားကြီးတစ်ယောက် စစ်မြေပြင်မှာ ဝမ်းလျားထိုး တွားတက်နေသလို ဗျား။ မောင်နတ်တို့မှာက ဘောလုံးတွေ သိမ်းကျုံးကန်လို့ ဆင်လို ခြေထောက်တွေ ဆိုတော့ ဆင်နှာမောင်းလို သွယ်ပျောင်းတဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေ မြင်တော့ ကြိုက်တာပေါ့ဗျာ။ ကြည့်ကောင်းပါ့ဗျာ့။ ဒါက မထူးဆန်းပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်တွေကိုး။ တချို့ သူငယ်ချင်း တွေကတော့ ဘယ်သူ အဖြူဆုံးလည်း ငြင်းနေကြလေရဲ့။ တချို့ကလည်း တောက် တခေါက်ခေါက် နဲ့ဗျ။ တချို့ လဲ ဒီပုံ သေးသေးလေး ကိုပဲ ပုံကြီး ချဲ့ကြည့် နေကြသေးတယ်။ အပြစ်တင် မစောလေနဲ့ဦး ခင်ဗျ ကျားတွေကိုး။ ကဲ ဒီတော့ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်ဗျာ အဲဒီ ကောင်မလေးတွေဟာ ယောက်ျားတွေရဲ့ ပစ်မှတ်ကြီး ဖြစ်မနေဘူးလား။ ယောကျှားတွေရဲ့ စိတ်ကူး စည်းစိမ် ခံစားစရာကြီး ဖြစ်မနေဘူးလား။
နတ်ဆိုး၏ စာကို လန်းနက်ဖိုရမ်မှ ကူးယူ ဖှောပြပါသည်။
ဆက်လက် ဖတ်ရှုရန် : ဒီနေရာသို့နှိပ်ပါ
Tags: Htet Htet Wint, Myanmar, Model, Planet
Posted by NLS at 1/28/2006 03:05:00 PM0comments Links to this post
ကျွန်တှော့ရဲ့ တက်ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝကို ပြန်စဉ်းစား မိတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ စွန့်စားသွားလာပြီး ဝင်ငွေ ကောင်းနေတဲ့ ကျွန်တှောဟာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်လာတယ်။ ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားလို့ နိုင်ငံခြား ရောက်နေစဉ် ကာလမှာ အလုပ်ကြမ်းတွေလည်း လုပ်ခဲ့ရတယ်။ ရေခဲမှတ်အောက် ရောက်နေတဲ့ ရာသီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတုန်း မြန်မာပြည်မှာ ဆေးကျောင်းတွေ ဖွင့်ပြီလို့ သူငယ်ချင်းက ဖုန်းဆက်တဲ့ အခါ ကျွန်တှောဟာ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုခဲ့ရတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆေးအမှတ် မမှီခဲ့တဲ့ ကျွန်တှောဟာ တစ်ခါတုန်းက ဆရာဝန် ဘဝကိုလည်း မျှောလင့်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အမေ့ရဲ့ တက်ကသိုလ် ပုံပြင်တွေ၊ စာအုပ်တွေထဲက ကျောင်းသားဘဝတွေ၊ ကံ့ကှောရနံ့တွေကို အိပ်မက်မက်ရင်း ကျွန်တှော တက်ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘဝကို ရယူမယ်လို့ စိတ်ကူးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး ကျိုးပမ်းမှု မှာ ပညာရှင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တှော ပါဝင်ချင်တယ်။ သူတကာ ပြောနေတဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်တဲ့ သူတွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်ပြီး မြန်မာ့ တက်ကသိုလ်ကို ကိုယ်တိုင်မတက်ဘူးတဲ့ သူတွေကို ကျွန်တှောက အထင်မကြီးဘူး။ အတွေ့အကြုံ မရှိဘူးလို့ မြင်တယ်။ ခေတ်ကို ပြန်ကြည့်ရင် ထင်ရှားခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသားတွေ အကျိုးကို ရှေးရှုခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တွေ တိုင်းဟာ မြန်မာပြည်မှာ တက်ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝကို ဖြတ်သန်းဖူးကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တှောက ကွန်ပြူတာ တက်ကသိုလ်ကို တက်ခဲ့တယ်။
ကျောင်းတက်တာ အနည်းငယ် နောက်ကျ ခဲ့ပေမယ့် ပရိုဂရမ်းမင်းဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုက ဖမ်းစားတဲ့အခါ ကျွန်တှောဟာ အရမ်းကို စွဲမက်ခဲ့ပြီး နေ့မအိပ် ညမအိပ် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သူရ လို့ ခှေါတဲ့ ကျွန်တှော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တှောဟာ အမြဲဆွေးနွေး တိုင်ပင်ရင်း အဲဒီဘာသာရပ်ကို တှောတှောလေး လိုက်စား ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောတို့ ကံမကောင်းခဲ့ဘူး။
တစ်နေ့မှာ ကျွန်တှောတို့ နှစ်ယောက် ပရိုဂရမ် တစ်ပုဒ်ရဲ့ လော့ဂျစ်ကို စဉ်းစားကြတယ်။ စဉ်းစားရင်းနဲ့ အကြံတစ်ခု ရပြီး ကျွန်တှောတို့ ဆရာဆရာမတွေဆီမှာ သိချင်တာတွေ မေးပြီး ကြံစည်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါက ဘာလည်း ဆိုတော့ Security Card လို့ ခှေါတဲ့ System တစ်ခု အကြောင်းပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ ယခုတိုင် သုံးစွဲနေကြတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကဒ်ထည့်လိုက်ရင် တံခါးတွေ အလိုလို ပွင့်သွားတဲ့ System မျိုးပါ။ အဲဒါအတွက် ကျွန်တှောတို့ နှစ်ဦးဟာ အဲဒီအချိန်က ပရိုဂရမ်းမင်းဘက်မှာ အလွန်တှောတယ် ဆိုတဲ့ ဆရာတစ်ဦးထံမှာ ရေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ် အကြမ်းလေးနဲ့ လောဂျစ်ကို သွားရှင်းပြပြီး အကြံတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က အဲဒီဆရာဟာ ကောင်မလေး တသိုက်နဲ့ ကျောင်းကင်န်တင်းမှာ စကား ဝိုင်းဖွဲ့နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့က ဆရာ့ဆီမှာ ခွင့်တောင်းပြီး ကျွန်တှောတို့ စိတ်ကူးလေးတွေကို တင်ပြပါတယ်။ အဲဒီဆရာဟာ ဘာပြောတယ် ထင်ပါသလဲ။ ဒီစနစ်ဟာ နိုင်ငံခြားမှာ ရှိပြီးသားတဲ့ မင်းတို့ ပရိုဂရမ်ကို အကောင်အထည် ဖှောလို့ ကုန်ကျ စရိတ်က အဲဒါကို ဝယ်တာထက်တောင် ပိုအကုန်အကျ များနေလိမ့်မယ်တဲ့။ အဲလို ပြောပြီး ကျွန်တှောတို့ကို ရယ်လွှတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တှောဟာ ဒေါသထွက်လွန်းလို့ ရှက်လွန်းလို့ အဲဒီ စာရွက်တွေအားလုံးကို အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ဖြဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ တပည့်တစ်ယောက်ရဲ့ ကွန့်မြူးနေတဲ့ စိတ်ကူးတွေကို အားမပေးဘဲ ချိုးနှိမ်ရက်လေခြင်း ဆိုပြီးလည်း အရမ်း နာကျည်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တှောတို့ အမြင်တွေ ပြောင်းသွားတယ်။
ကျွန်တှောဟာ ကျောင်းကို တက်သာတက်နေခဲ့တယ်။ ကျောင်းကို ချစ်လျက်နဲ့ စိတ်နာခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ဆရာမျိုးတွေကို စိတ်နာခဲ့တယ်။ တကယ်ဆို သူဟာ ကျွန်တှောတို့ကို အားပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့ အယူအဆ မှားနေဦးတော့၊ သူက အကြံသစ်ကို ပေးသင့်ပါတယ်။ လမ်းညွှန်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တှော့ရဲ့ ကွန်ပြူတာ ပညာရှင် ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်လေးကို မျိုးတုန်းအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆရာဆိုတဲ့ ပထမ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ တစ်ယောက် ကျန်ပါသေးတယ်။ သူကတော့ အပြင်က နာမည်ကြီး ကွန်ပြူတာ ရှေ့ဆောင် ဆရာကြီး တစ်ဦးပါ။
Posted by NLS at 1/28/2006 08:27:00 AM0comments Links to this post
တစ်သက်တာ ပတ်လုံး ဖတ်ခဲ့ ရတဲ့ မြန်မာ စာအုပ်တွေထဲမှာ အနှစ်သက်ဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ကို မနေ့က မှ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ “ ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းထွန်း ရဲ့ ငါပြောချင်သမျှ ငါ့အကြောင်း ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါပဲ။ စာမျက်နှာ ၁၅၇ မျက်နှာ ရှိပြီး ဆရာကြီးရဲ့ အတွေးအမြင် အယူအဆ၊ သဘောထားတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တှော့ ဘဝတစ်သက်တာမှာ ဆရာကြီးလို ဆရာမျိုး တစ်ယောက်လောက် တွေ့ခွင့် ကြုံချင်ပါဘိ။ သူဟာ တခေတ်မှာ တစ်ယောက်ထွန်းတဲ့ ပညာရှင်ပဲ။ ဖတ်နေရင်းက သူကွယ်လွန်သွားတာကို ယူကျုံးမရ ဖြစ်နေမိတယ်။
ခင်ဗျားရေးတဲ့ ခေတ်ဟောင်း မြန်မာရာဇဝင် ပြည်သူ လက်ထဲကို မရောက်ဘူးလို့ သူများကပြောတော့ ဆရာကြီးက - “ ငါရေးတာ လူထုလက်စွဲ မဟုတ် လို့ “ ပြန်ဖြေခဲ့ပါသတဲ့။ တန်ဖိုးရှိသော စာဟာ လူတိုင်းနဲ့ မထိုက်တန် ဆိုတာကို နားလည် လိုက်ပါတယ်။
ဆရာကြီးရဲ့ စကားပြော ရေးဟန်ဟာ ကျွန်တှော အနှစ်သက်ဆုံး အရေးအသားပဲ။ မြန်မာတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ပါပဲ။ အဖိုးတန်တဲ့ စာတွေ စကားတွေ ဖြစ်ရပ်တွေ သမိုင်း အထောက်အထားတွေ အများကြီး တွေ့ရတယ်။ ဆရာ့ စာတွေကို ဖတ်ရင် အဆိုးမြင်ဝါဒ ရှိသူရယ် လို့ ထင်ရနိုင်ပေမယ့် ခေတ်ကာလတစ်ခုမှာ ပညာရှင်တစ်ယောက် အဖိနှိပ် အကန့်သတ်ခံရပြီး တန်ဖိုးအထား မခံ ရလို့ နာကျည်းစိတ်နဲ့ အထေ့အငေါ့ လေးတွေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ကျွန်တှော ယူဆမိတယ်။
ဆရာကန်တော့ ပွဲလုပ်ပြီး ကျောင်းသားတွေ ကန်တော့ ကြတော့ ဆရာက- ဒါ လာဘ်ပေးတာ တစ်မျိုးပဲလို့ တွက်ပါသတဲ့။ ပြီးတော့ ဆုမပေးပါဘူးတဲ့။ မင်းတို့ ပေးတာက နည်းတယ်. ငါကပြန်ပြီး နိဗာန်ဆု မပေးနိုင်ဘူး.။ မင်းတို့နဲ့ မတန်ဘူး ရယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လေးစားဖွယ်ကောင်းသော ဆရာ။
ကျွန်တှော့မှာ ဆရာ့ စာအုပ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ရန်ကုန် ပြန်ရင် ဒီစာအုပ်လေးကို မရရအောင် ဝယ်ပြီး သိမ်းထားမယ် လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ ဒါမျိုးဟာ တစ်သက်မှာ တစ်ခါ ဖတ်ရခဲပါတယ်။
မတှောလိုက်ရတဲ့ ဆရာ့ကို ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီး ကန်တော့ပါတယ်။ ပညာရှင် ပီသသော ဆရာ။
မှတ်ချက် ။ ဒီစာအုပ် အီးဘွခ်ကို Myanmar Pyi Thar နဲ့ Cherry Thit Sar မှာ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Tags : Dr. Than Htun , Essay , Website , Ebook , Idea
Posted by NLS at 1/28/2006 07:40:00 AM0comments Links to this post
Dr. Than Tun , Idea
Posted by NLS at 1/28/2006 07:21:00 AM0comments Links to this post
မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ မက်ခရာ မင်းသားကြီးဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ မင်းသားနှစ်ပါးရှိပါတယ်။ မြန်မာ့ အဘိဓါန်ကို ချားလ်လိန်း နဲ့ အတူ ပြုစုခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီးက ပထမ မက်ခရာ မင်းသားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုးတှောဘုရား (ဗဒုံမင်း) နဲ့ မြောက်နန်းမိဖုရား သီရိမဟာ ရတနာဒေဝီတို့က နေ ၁၁၅၃ ခုနှစ် နတ်တှောလဆန်း ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဖွားမြင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်နာမည် မောင်ဖြိုးလို့ ခှေါပြီး အလောင်းမင်းတရားကြီးနဲ့ ရုပ်ချင်း ဆင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ စာပေကို အလွန်တရာ လိုက်စားခဲ့ပြီး ကျမ်းပေါင်း ၂၀၀ ကျှောကို မြန်မာဘာသာကို ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ မင်းသားကြီးဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက လေငန်းရောဂါကြောင့် မသန်စွမ်း ပါဘူး။ အဂဿငလိပ်ဘာသာနဲ့ သခဿငျာဘာသာကို အထူး စိတ်ဝင်စားတှော မူပါတယ်။ ပထမဆုံး မြန်မာ အဘိဓါန်ကို မင်းသားကြီးဟာ ၁၈၃၀ ခုနှစ်လောက်မှာ ဆရာဝန် ဒေါက်တာ ပရိုက်နဲ့ အတူ ဘာသာ ပြန်ဆိုတှောမူပါတယ်။ သူမရှိတဲ့နောက် ချားလ်လိန်းနဲ့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ အဘိဓါန်ကျမ်းကို အခု မြန်မာ့အမျိုးသား စာကြည့်တိုက်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ၁၀ လက်မ * ၈ လက်မ ခန့် အရွယ်ရှိပြီး စာမျက်နှာ ၄၆၈ မျက်နှာ ရှိပါတယ်။ မန်းတလေးမြို့ က မလွန်ရပ်ကွက် ဆိုတာ တချိန်က မင်းသားကြီး ခေတ်တ နေခဲ့တဲ့ နေရာပါ။ မလွန်မင်းသားကြီး လို့လည်း ခှေါကြပါတယ်။ သားတှော သမီးတှောတွေကနေ နောက်ထပ် သားသမီး မမွေးဖွားခဲ့လို့ မင်းသားကြီးရဲ့ မျိုးဆက် မကျန်ရစ်တော့ပါဘူး။ အဲဒီခေတ်က အာရှတိုက်ရဲ့ ထိတ်ထိတ်ကြဲ ပညာရှင် သုတေသီများသာ ဝင်ခွင့်ရတဲ့ ဘဂဿငလား အာရှ ဆိုင်ရာ ဝိဇ်ဇာ သိပ်ပံ သုတေသနအသင်းကြီး ရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် အသင်းသား အဖြစ် အရွေးချယ် ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂၁၀ ခုနှစ် ဒုတိယ ဝါဆိုလပြည့်ကျှော ၁၀ ရက်နေ့ညမှာ မင်းသားကြီး ကံကုန်တှော မူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာတွေ အမှတ်မှားနေတဲ့ ဒုတိယ မက်ခရာ မင်းသားကြီးဟာ အသက် ၁ နှစ်သားသာ ရှိပါသေးတယ်။
စာကိုး ။ ကုန်းဘောင်ရှင်းတမ်း ( မောင်သန်းဆွေ) ၊ ပထမ မြန်မာများ (မင်းယုဝေ)
ဒီစာအုပ်တွေကို Cherry Thit Sar မှာအခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Essay , Ebook
Posted by NLS at 1/28/2006 06:19:00 AM0comments Links to this post
စဉ်းစားကြည့်တဲ့ အခါ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပဒေသရာဇ် လက်ထက်မှာ လူတှောတှောတှော များများ ကြွေလွင့် ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ယောင်ယောင် ဘာသာရေး ယောင်ယောင် မင်းတုန်းမင်းကြောင့် နိုင်ငံဟာ လက်နက် အတတ်မှာ ရပ်တန့် ခဲ့ ရတယ်။ သူ့ရဲ့ မပြတ်သားတဲ့ သဘောထားတွေကြောင့် နောက်တက်လာတဲ့ ထီးနန်းဟာ ပျော့ညံ့တဲ့ သီပေါဘုရင် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ လိင်အရှုပ်အထွေး ဝါသနာ ပါလွန်းတာကြောင့် မိန်းမ များစွာ ယူခဲ့ ပြီး သားသမီး များစွာ မွေးလာခဲ့တာဟာ မြန်မာ ပြည်ကို သူ့ကျွန်ဘဝ ရောက်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုပါပဲ။ တကယ်တမ်းတော့ သီပေါမှာလည်း အပြစ်တော့ သိပ်မရှိလှပါဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူ့လက်ထက်မှာ မြန်မာပြည် ဆိုတာ နာမည်ပဲ ကျန်တော့တာပါ။ ဘုရင်တွေဟာ ရွှေဘုံပှေါမှာ နေပြီး ပြည်သူတွေ ဘဝကို မသိကြပါဘူး။ အနှောရထာတို့ သာလွန်မင်းတို့ လက်ထက်မှာ တိုင်းခန်း လှည့်လည်တာတို့ တစ်ယောက်တည်း ထွက်ပြီး စနည်းနာတာတို့ တွေ့ရပေမယ့် ဒီနောက်ပိုင်း ခေတ်တွေမှာတော့ မတွေ့ရပါဘူး။ ကိုယ့်ထက် အင်အားကြီးမား ကျယ်ပြန့်တဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုကို သဘေဿငာလေးတွေနဲ့ လာပြီး သိမ်းပိုက်သွားတဲ့ အဂဿငလိပ်တွေဟာ တကယ်တှောတယ်လို့ ကျွန်တှော လေးစားမိပြန်ပါတယ်။ ဒီလို ပြောတဲ့အခါ ကျွန်ဖြစ်ရတာကို သဘောကျလို့ လားလို့ ဆိုစရာ ရှိလာပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ကျွန်ဖြစ်တာ နည်းတောင် နည်းသေးတယ် လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ အဂဿငလိပ်နယ်ချဲ့ဟာ အကောက်ကြံပြီး မြန်မာ ပြည်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ တယ်ဆိုတာ ကြက်တူရွေး နှုတ်တိုက် သလိုပဲ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ အခြေခံ ကျကျ စဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယ်လည်း ယိုးဒယားကို တိုက်ခဲ့ တာပါပဲ။ နိုင်ငံတှော ကြီး တည်ဆောက်တယ် ဆိုတာ တကယ်တော့ အင်အား ချဲ့ ထွင်ခဲ့တာပါပဲ။ ယိုးဒယားတွေလည်း ဗမာတွေကို ကြေမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယိုးဒယားဟာ မပျက်စီး သွားခဲ့ဘူး။ သူလည်း အသိမ်းပိုက် ခံခဲ့ရတာပါပဲ။ အခုဆို ယိုးဒယားဟာ ခေတ်မီ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်နေပြီး သူ့ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာတွေကတော့ သူတို့ဆီကနေ အကူအညီတွေ ပြန်ယူနေရပြီ။ ကျွန်တှောတို့ ဘာလို့ ညံ့ခဲ့ကြတာလဲ။ ဆွေးနွေး ချင်တဲ့ သူတွေကိုလည်း ဖိတ်ခှေါပါတယ်။
Essay , Idea , Myanmar
Posted by NLS at 1/25/2006 10:00:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/25/2006 09:39:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/24/2006 10:26:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/23/2006 11:46:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/23/2006 10:24:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/23/2006 10:13:00 AM0comments Links to this post
ဒီနေ့ မဟာဘရတ စာအုပ်ကြီး ပထမပိုင်း ပြီးသွားပြီ။ ပြီးအောင် ဖတ်မယ်ဆိုပြီး တစ်ညလုံး ထိုင်ဖတ် ပစ်လိုက်တယ်။ စာမျက်နှာ ၉၀၀ ကျှော ပြီးသွားပြီ။ တစ်လလောက် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ။ မြန်မာ ပြန် အကျဉ်း ဖတ်ခဲ့ရ တုန်းကတည်းက စိတ်ဝင် စားခဲ့တာ။ အခုမှ အာသာ ပြေတော့တယ်။ ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာက ရသေ့တစ်ပါးက ဘယ်လိုလုပ်များ ဒီလောက် ကောင်းတဲ့ အီပစ် တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်နှော။ မသိတာတွေ အများကြီး သိလာရတယ်။ ပဏဿဍဝမင်းသားတွေနဲ့ ကောရဝ မင်းသားတွေ ဖြစ်တဲ့ စစ်။ ကရစ်သျှနား ဘုရားသခင် စစ်ရထားမောင်းသူ အဖြစ်နဲ့ ပါဝင်တဲ့ စစ်၊ ရမက်တွေ၊ အညှိုးတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ စစ်၊ အိလျဒ် နဲ့ ဪဒေးဆပ် ထက် အများကြီး သာတယ်။ ဖတ်ခဲ့ ဖူးသမျှ စာအုပ်တွေထဲမှာ မဟာဘာရတ နဲ့ တစ်ထောင့်တစ်ည ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အင်း နောက် ထပ် ဒုတိယပိုင်း ဖတ်ရဦးမယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ဆရာကြီး သခင်ဘသောင်းလို စွဲမက်ဖို့ ကောင်းအောင် ဘာသာပြန်တဲ့ လူရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ ဖတ်တဲ့ သူတိုင်း ကြိုက်ကြမှာပဲ။ ရန်ကုန်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြန်က စာမျက်နှာ ၂၀၀ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ အခု မူရင်းက အတွဲ ၁ဂ တွဲ။ ဒါမျိုးစာအုပ် ဖတ်ရတာ တန်တယ်။ ကုန်သွားတဲ့ ပိုက်ဆံ ထက်ကို ပိုပြီးတန်တယ်။ လီဗိုက် တစ်ထည်ဝ ဝယ်ဝတ်မယ့် အစား ဒါမျိုး ဝယ်ရတာ ဘဝရဲ့ ပျှောရွှင်စရာ တစ်ခုပဲ။
Diary , Idea , Essay , Mahabharata
Posted by NLS at 1/23/2006 09:46:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/23/2006 12:39:00 AM0comments Links to this post
Yah, this is me and how I 've done my homeworks when I was in Singapore. I had been taken this photo in Esplanade. It was my Portfolio Project. Thanks Mee Mee for sending me. Look carefully! you will see how thin I was. 5' 8.5". 115 lbs , quite long hair. Now its over! :)
NLS , Photo , Diary
Posted by NLS at 1/23/2006 12:08:00 AM0comments Links to this post
ကြောင် တစ်ကောင်သည် စားပွဲပှေါမှ ငါးကြှောကို ဆွဲယူရန် ကြိုးပမ်းနေ၏။ ဖန်အိမ်ထဲငါးက ထိုကြောင်၏ လှုပ်ရှားမှု များကို စိတ်ထဲမှ လိုက်လံ မှတ်သားလျက်ရှိသည်။ (တနေ့နေ့တွင် နောင်လာနောက်သားများအား ပြောပြရန်)။ ကျားတစ်ကောင် လူကို ကိုက်သောအခါ နာကျည်းစွာ လက်စားချေ ကြသှောလည်း လူတစ်ယောက် ကျားကို သတ်သောအခါ အမဲလိုက်ခြင်းဟု အမည်ပေး တတ်ကြသည်။
လူဆိုသည်မှာ အလင်းရောင်သာ မရှိလျှင် ကြောက်တတ်လွန်း မကောင်းမှုများစွာ ကြံစည်တတ် လွန်းသော အကောင်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ထိုအကောင်တွင် ထက်မြက်သော သွားများမရှိပါ။ အင်အား ကောင်းသော နှာမောင်းများ မရှိပါ။ ပျှောဝင် စေတတ်သော အဆိပ်များလည်း မရှိပါ။ ခုန်ပျံနိုင်သော အစွမ်းလည်းမရှိပါ။ သို့သှော ထိုလူတို့သည် မာကျောသော အရာများကို ခပ်တုံးတုံး သွားများဖြင့် ကိုက်ဝါးနိုင်ရန် မီးကို သုံးတတ်သည်။ အားကောင်းသော နှာမောင်းများကို နှာမောင်းများကို ထိန်းချုပ်ရန် ချွန်းဆိုသော အရာကို ကိုင်တွယ်တတ်သည်။ အဆိပ်ရှိသော သတဿတဝါများကိုပင် ရောင်းစား တတ်သေးသည်။ ထိုလူတို့ ခေါင်းထဲတွင် တရုတ်တန်းမှ ရောင်းသော အီကုတ်ခှေါ အကောင်လေးများ ပုံစံ ခပ်ပျော့ပျော့ ဦးနှောက်ဆိုသော အရာရှိသည်။ ထိုဦးနှောက်ထဲတွင် သွေးသားဆနဿဒ၊ ငွေကြေး၊ လောဘနှင့် အတဿတ များသာရှိသည်။ ထိုအရာ၏ အရောင်မှာ အဖြူရောင် သဲ့သဲ့ရှိသည်။ ရေစိမ်ကြည့်လျှင် အနီရောင်နှင့် အနက်ရောင်များ ထွက်လာတတ်သည်။
လူတွင် လက်နှစ်ဘက် ပါသည်။ တစ်ဖက်မှာ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ရန် ဖြစ်၍ အခြားတစ်ဖက်မှာ လုပ်ကြံရန် ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက် တတ်သူများကို သတိထားပါရန်။ လူတွင် ခြေထောက် နှစ်ချောင်း ပါသည်။ တစ်ချောင်းမှာ ရှေ့တစ်လှမ်း တိုးရန်ဖြစ်၍ နောက် တစ်ချောင်းမှာ နောက်သို့ နှစ်လှမ်း ဆုတ်ရန် ဖြစ်သည်။ လူတွင် မျက်စိ နှစ်လုံးပါသည်။ တစ်လုံးမှာ သူတစ်ပါးအပြစ်ကို လိုက်ရှာရန် ဖြစ်၍ နောက်တစ်လုံးမှာ အိပ်စက်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ လူတွင် နှာခေါင်းပေါက် တစ်စုံပါသည်။ တစ်ပေါက်မှာ ရနံ့များကိုခံယူရန်ဖြစ်၍ နောက်တစ်ပေါက်မှာ ဆေးလိပ်ငွေ့များကို စွန့်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ လူတွင် အသည်းနှစ်လုံး တစ်ခုပါသည်။ သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါဖြစ်ရန် အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ ရှိလေသည်။ ထိုမျှလောက်သာရှင်းပါဦးမည်။
ကျွန်တှောတွင် ဗုံတစ်လုံးရှိသည်။ တီးခတ်သောအခါ ဗုံဗုံဟု မြည်ရမည့်အစား မြိုသိပ် နေတတ်သည်။ ကောင်မလေး တစ်ယောက် ပန်းခင်းထဲတွင် ပန်းလိုက်ရှာနေသည်။ သူမ ရှေ့တွင် ရှိနေသော ပန်းများ အားလုံးကို လှသည်ဟု သူမ မထင်ပါ။ အမွှေးပျံ့ဆုံးသော ပန်းကိုသာ လိုချင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကြောင်သည် စားပွဲပှေါမှာ ငါးကြှောကို ချောင်းမြောင်းနေသည်။
နာရီသံ များကိုကြား၍ ကျွန်တှော လန့်နိုးလာသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိုးဖွဲဖွဲရွာနေ၏။ လက်ထဲမှ မီးခြစ်ကို ထောက်ခနဲ ခြစ်ပြ လိုက်သောအခါ ကမဿဘာဦးလူများ အံ့အားသင့်စွာ အှောကြလေသည်။
နောက်ဆုံးစကား... ဤကမဿဘာတွင် ကျွန်တှောဘာလိုချင်ခဲ့မှန်း မသိခဲ့ပါ။
အိပ်မက်သည် ကျွန်တှော့ကို လိုက်လံ ရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်တှောက တောင်စောင်း တစ်ခုပှေါမှာ ပြေးနေမိသည်။ ရှေ့ကိုက် ၁ဝဝခန့်တွင် ချောက်တစ်ခု ရှိသည်။ ချောက်ထဲကျခြင်း မကျခြင်းမှာ ကျွန်တှောနှင့် မဆိုင်ဘဲ လွတ်လပ်စွာ ပြေးလွှားခွင့် ရခြင်းသာ ကျွန်တှောနှင့် ဆိုင်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် လွတ်လပ်စွာ ပြေးလွှားခွင့် ရခြင်းမှာ ကျွန်တှောနှင့် မဆိုင်ဘဲ ချောက်ထဲကျခြင်း မကျခြင်းသာ ကျွန်တှောနှင့် ဆိုင်ပါသည်။
အန်စာတုံးကို ခလောက်ကာ ချလိုက်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဝါရင့် လောင်းကစားသမား မဟုတ်လျှင်တော့ ကျွန်တှော့ကို အနိုင်ရရန်မှာ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀ သာ ရှိပါလိမ့်မည်။
ဤစာကို ရေးပြီးချိန်တွင် ကြောင်သည် ငါးကြှောကို စားနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဖန်အိမ်ထဲမှ ငါးကလည်း အားလုံးကို မှတ်သားပြီး ဖြစ်သည်။ တနေ့နေ့ တချိန်ချိန် အခါအခွင့် သင့်လျှင်တော့ နောင်လာ နောက်သားများကို သူပြန် ပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူ ဟိုတစ်လောက နီမိုငါးကလေး ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်လိုက်ရသည် မဟုတ်ပါလော။
Nyi Lynn Seck Essay Cat
Posted by NLS at 1/17/2006 09:56:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/17/2006 08:56:00 AM0comments Links to this post
Do you think that your Burmese writing is correct? This is how to write Myanmar Alphabets systematically. I got that one from one of website onceatime, but sorry for my poor memory to index where it was from. I recommand, you will get very nice hand writing if you follow the correct direction, was shown in pic. See how!
Remark: This Pic is abit wrong. See more in Comments
Myanmar , Idea
Posted by NLS at 1/15/2006 10:39:00 AM2comments Links to this post
ကျွန်တှော ညနက်နက်မှာ တစ်ယောက်ထဲ ထိုင်နေတယ်။ ကျွန်တှော ထိုင်နေရာ အိမ်ခေါင်မိုး ပှေါက ကြည့်ရင် ကြယ်တွေကို မြင်နေရ ပါတယ်။ အစအဆုံး မမြင်နိုင်တဲ့ ကောင်းကင် လွင်ပြင် တလျောက်မှာ ကျွန်တှော့ စိတ်တွေက ကြယ်သွားရာ လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ အတူ လွင့်မျော နေတယ်။ ကျွန်တှောက သီချင်းသံ တိုးတိုးလေးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဗီသိုဘင်ရဲ့ မွန်းလိုက်ဆိုနာတာ။ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ချစ်ခြင်းတရားက ဘာပါလဲ။ ကျွန်တှောရဲ့ စိတ်တစ်ခုလုံးဟာ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်တဲ့ ကောင်းကင်အောက်မှာ စနဿဒယားသံရဲ့ ခှေါဆောင်ရာကို ပါသွားတယ်။ အလွမ်း အကြွင်းအကျန် တစ်ချို့က ကျွန်တှော့ သတိရခြင်းကို ဖြစ်စေတယ်။ အရာရာဟာ ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ။ အပူအပင်တွေအားလုံး မေ့သွားတယ်။ လူတွေရဲ့ ယုတ်မာမှု တွေကို မေ့သွားတယ်။ ကျွန်တှော မျက်ရည်တချို့ ကျလာတယ်။ သာမန် လူတွေအတွက် အံ့ဩစရာ ဖြစ်နေကောင်း ဖြစ်နေနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တှောလို စောက်ရူး တစ်ကောင် မျက်ရည်ကျတာ ကျွန်တှော့ အတွက်တော့ ဘာမှ မထူးဆန်းလှပါဘူး။ အားလုံးရဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေ ဖြူစင်မှုတွေ သံယောဇဉ်တွေ အမှတ်တရတွေနဲ့ မေတဿတာတရား သက်သက်တွေကို ခံစားရတဲ့အခါ ခင်ဗျားတို့ မျက်ရည် မကျဖူးဘူး ဆိုရင် ကျွန်တှောပြောသလို ညနက်နက်ထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ ဗီသိုဘင်ရဲ့ မွန်းလိုက်ဆိုနာတာ လေးကို နားထောင်ကြည့်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။
Posted by NLS at 1/14/2006 04:54:00 AM0comments Links to this post
မှောဒန်ကဗျာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့၊ ချစ်တဲ့ သူတိုင်းကို ဖိတ်ခှေါပါတယ်။ တာရာမင်းဝေ၊ မင်းခိုက်စိုးစန်၊ နိုင်မွန်အောင်သွင်၊ သစ်စာနီ၊ မြင့်မိုးအောင်၊ ဝိုင်ချို၊ နိုင်မွန်အောင်သွင်၊ နေမျိုး၊ ခရမ်းပြာထက်လူ၊ ကေဇှော အစရှိတဲ့ ကဗျာဆရာများနဲ့ ကျွန်တှော့ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ရဲ့ ကဗျာတွေနဲ့ ကျွန်တှော့ကဗျာတွေကို မြန်မာလို တင်ထားပါတယ်။ ဖတ်ရှု အကြံပေးကြပါဦး။
Myanmar Modern Poem
Tag : Web , NLS , Poem
Posted by NLS at 1/14/2006 04:41:00 AM0comments Links to this post
စိတ်ညစ်တာဟာ စိတ်ပျက်တာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာ စိတ်က တစ်ချိန်လုံး လေးလံထိုင်းမှိုင်းပြီး ညစ်ညူးနေတာ။ ပျှောစရာ တွေ့လည်း မပျှောဘူး။ စိတ်ပျက်တယ် ဆိုတာက လှည့်မကြည့်ချင် တော့တာ။ ဘာကိုမှ မလုပ်ချင်တော့တာ။ စိတ်ကုန်တယ် ဆိုတာက စိတ်ကုန်သွားတာ။ ဘာမှကို မရှိတော့တာ။ စိတ်ဆင်းရဲ တယ်ဆိုတာ တွေးမိတိုင်း စိတ်ညစ်နေရတာ။ မတွေးချင်လည်း အတွေးထဲကို အဲဒါတွေက ရောက်ရောက် လာတတ်တာဟာ စိတ်ဆင်းရဲတာပဲ။ စိတ်ဆိုးတယ် ဆိုတာက မီးလိုပဲ။ သတ်လို့ရတယ်။ လောင်စရာ ကုန်သွားတဲ့အခါ အဲဒီမီးက အလိုလို ငြိမ်း သွားတယ်။ စိတ်လေတယ် ဆိုတာ စိတ်ကုန်ခါ နီးစပြုတာ။ စိတ်က ဆိုးရတာ များလာရင် ညစ်လာတယ်။ ညစ်ပြီးရင် ပျက်လာတယ်။ ပျက်ပြီးရင် ဆင်းရဲတယ်။ ဆင်းရဲ ပြီးရင် စိတ်ကုန်တာပဲ။ ကျွန်တှော ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ် စိတ်ကုန်လာတယ်။ ဘာလို့များ လူလာ ဖြစ်ပါလိမ့်နှော။ ပင်ပန်းလိုက်တာဗျာ။
Diary , NLS , Idea
Posted by NLS at 1/14/2006 04:26:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/12/2006 06:50:00 AM0comments Links to this post
စပယ်တွေ တဝုန်းဝုန်း ရွာချခဲ့တာတောင်မှ
၂၆ နှစ်သာ ကြာသွားတယ်
တစ်ခါမှ ဈေးကောင်းပေးဝယ်တာ မခံရပါဘူး။
အခုတော့ ... ဟောဒီ ကောင်မလေးကိုပဲ
နံရံပှေါက ဖြုတ်ချ ခိုးယူသွားလို့...
ငါ့ရဲ့ မွတ်သိပ်ခြင်းတွေကို သယ်ပိုးသွားတဲ့
ငါ့ရဲ့ အမည်နာမ မရှိတဲ့အဖြစ်နဲ့
တရားဝင် သေဆုံးခွင့် ပေးပါ။
ငါ့ တနဂဿငနွေကို ငါ ဖန်ဆင်း
(ငါ့ကို) သေအောင်ပဲ ခြောက်လှန့်နေရော့တယ်...။
See more Poems here : Myanmar Modern Poem
Posted by NLS at 1/12/2006 04:22:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/12/2006 03:56:00 AM0comments Links to this post
ကျွန်တှော စိတ်ဓါတ်တွေကျတိုင်း သတိရမိတဲ့ကဗျာ။
Poem , Tar Yar Min Wai
See more poems here : Myanmar Modern Poems
Posted by NLS at 1/12/2006 03:44:00 AM0comments Links to this post
ဒီပုံကတော့ ဘုရားရှင်နဲ့ ပတ်သတ်သမျှမှာ အရေး အပါဆုံး ဒေသတွေပါ။ တောင်ကျွန်းလို့ လူသိ များကြတဲ့ ဂဂဿငါ မြစ်ဝှမ်းကြီး တလျောက်လုံးရဲ့ ပုံပါ။ မြစ်ချောင်းတွေ အလိုက် တိုင်းနိုင်ငံကြီးတွေ နဲ့ မြို့ကြီးတွေ ပိုင်းခြားပြီး တည်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်။
Tag : Mahajanapada , NLS , Essay
Posted by NLS at 1/10/2006 10:46:00 PM0comments Links to this post
ကာသေ့တိုင်း( Kasi )ရဲ့ မြို့တှောက ဗာရာဏသီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာသေ့တိုင်းဟာ ယခင်က သီးခြားတိုင်းကြီး အဖြစ်နဲ့ တည်နေပေမယ့် ဘုရားရှင် လက်ထက်တှောမှာတော့ ကောသလ တိုင်းကြီး ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘုရင်က ပသေနဒီ ( Pasenadi ) ကောသလမင်း ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရင် ဘိမဿဗိသာရ နဲ့ ယောက်ဖ တှောပါတယ်။ မြို့တှော ဗာရာဏသီဟာ ဂဂဿငါ မြစ်ကမ်းပါးမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ယနေ့ အုတာပရာဒက်ရှ် ပြည်နယ်ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗာရာဏသီဟာ အိမ်နီးချင်း ဝံသတိုင်း မြို့တှော ကောသမဿဗီ ပြည်နဲ့ ၇၂.၅ မိုင်၊ ရာဇဂြိုလ်နဲ့ ၁၅၄ မိုင် ဝေးပါတယ်။
ဗာရာဏသီဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ အိနဿဒိယရဲ့ အရေးပါတဲ့ မြို့တှောတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ယဉ်ကျေးမှုလည်း သီးခြားတည်ရှိတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် တွေးခှေါပညာရှင်တွေ အနုပညာရှင်တွေမွေးဖွားရာ ဒေသလည်း ဖြစ်တယ်။ ကာသေ့ရဲ့ အချက်အခြာတင်မဟုတ်ဘူး။ ဗာရာဏသီဟာ အိနဿဒိယရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အချက်အခြာလို့လည်း ပြောလို့ ရတယ်။ ဘုရားရှင် မတိုင်ခင်တုန်းကတော့ ကာသေ့တိုင်းဟာ အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ကာသေ့နဲ့ ကောသလက မတည့်ဘူး။ မဂဓနဲ့ အဂဿငက မတည့်ကြဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကာသေ့ဟာ ကောသလတိုင်းရဲ့ လက်အောက်ခံ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး ဘုရင်ကိုယ်တိုင် အဲဒီမှာ စိုးစံတဲ့ အထိပါပဲ။
မြို့တှော ဗာရာဏသီ ( Benares ) ( lat=25.32, lon=83.01 )
Tags : Benares , Kasi , Pasenadi , Kosala
Posted by NLS at 1/10/2006 10:21:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 1/10/2006 08:34:00 AM0comments Links to this post
ဗုဒဿဓမြတ်စွာ ဖွားမြင်ချိန်က အိနဿဒိယရဲ့ တိုင်းကြီးတွေ
ကျွန်တှော ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖို့ အတှောလေး အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်တွေနဲ့ လူကြီး တှောတှော များများတောင် မသိနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချို့နဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကို ဝေမျှချင်တာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားအကြောင်းကို လက်တွေ့ကျကျ သိနိုင်အောင်လို့လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမယ့်သူ ဖြည့်စွက်ပေးမယ့် သူအားလုံးကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ အချက်အလက်တှောတှောများများကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး စာအုပ်၊ အင်တာနက်၊ ဒီမှာ ရှိနေတဲ့ ဘုန်းတှောကြီးတွေကို ကိုးကားပြီးတော့ တိကျအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်လေးတွေကို သူများကိုတဆင့် ပြန်ပြီး ပြောပြပေးရင်းနဲ့ ဗဟုသုတ ပြန့်ပွားစေချင်တာ ကျွန်တှော့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တှော မှားတယ်ဆိုရင် အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ငြင်းစေလိုပါတယ်။ အချက်အလက်ကို တိကျစေလိုတာကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အိနဿဒိယ ခေတ်အဆက်ဆက် မြေပုံများ
အသောက မင်းတရားကြီး ခေတ် မှတ်တမ်းများ
အိနဿဒိယ ရှေးဟောင်း ကျမ်းစာများ
Posted by NLS at 1/10/2006 08:22:00 AM0comments Links to this post
အားလုံး မဂဿငလာပါ။ ဘလှောခ့် မလုပ်ဖြစ်တာ တှောတှောကြနေတာ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ မနေ့က ကိုမျိုးရဲ့ မေးလ်ကို ရမှပဲ ပြန်လုပ်ဖို့ အားတင်းမိတယ်။ ဘာရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်တွေက နဲနဲ လေလွင့်နေလို့ပါ။ အခုတော့ စာတွေ ဖတ်ရင်း ပြန်အားရှိလာပြီ။ နှစ်သစ်ကူးမှာ မနှုတ်ဆက်လိုက်ရတဲ့ ဘလော့ခ်ဂါ သူငယ်ချင်းများဖြစ်တဲ့ ကိုဝေဖြိုး၊ ကိုမျိုး၊ ညီမ မေနှင်းဖြူ နဲ့ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးကိုလည်း နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
Posted by NLS at 1/10/2006 06:53:00 AM0comments Links to this post
Friend Myanmar Bloggers List
Albert Diary (M)
Aw Lan Mg (M)
Bayint Naung (M)
Chan Mya Soe (M)
Degolar (Chinese Blog)
Emotional Corner (M)
Fat Punk (M)
JL Photography (M)
Ko Lwin (Jeffchai) (M) (***)
Kyaw Min Tun (M)
Kalvin's Web Diary (M)
Ko Yae Noe (M+E)
Ko Myo Aung (M)
Myat Thu Ra (E)
Maung Hla's Diary (M)
Mg Zeng (M)
Moe Moe (E)
Moe Min Thar (M)
MM Posts (M)
Myanmar Modern Poems (M)
Myanmar Blues (M)
Myo Chau Htun (M)
MM Han (M+E)
Mg Yoe (E+M)
Ngwe Hnin Myu (M)
Nay Nay (M)
Nyein Chan (M)
99 Sanay (M)
Our Cries (M)
Pan Nwe (M)
Pan Pwint Lay (M)
Phyo Wai Kyaw (M)
Pyi Soe Y Z (M)
Sis Ain (M)
Shin Min's Coffee Corner (M)
Thiha Kyaw Zaw (E)
Thant Zin (E)
Thu Hnin See (M)
Thu Yein (M)
Wai Phyo (M+E)
Yamin Su Hlaing (M+E)
Zero Topic (E)
Zaw Moe Aung (M)
Only my friend bloggers. If you wanna find all, go and get there : Directory
Tags: Myanmar Bloggers, Myanmar Bloggers List, Myanmar Blog, Burmese Blogs, Myanmar Blogger Directory
Posted by NLS at 1/01/2006 09:19:00 AM0comments Links to this post
May Dar Wii (M)
Speaking Out Loud (E)
Thet Naing's Note (M)
Posted by NLS at 1/01/2006 08:54:00 AM0comments Links to this post